Banyere Anyị - Dongguan Weldo nkenke machining Co., Ltd.
Dongguan Weldo nkenke machining Co., Ltd. bụ a emeputa gbaara site ISO 9001, guzosie ike 2008. Ebe ọ bụ na ya oruru, ọ dịla afọ 13, anyị anọwo na-agbaso na ụlọ ọrụ nkwenkwe site na mmalite nke oruru, ikenyeneke mbiet technology, ahịa mbụ.
Anyị bụ ndị a pụrụ ịdabere na n'ichepụta soplaya a na ubi. Anyị eguzobewo ihe impeccable aha na àgwà nnyocha, ahịa ọrụ, mgbe-sales mmezi na ojiji, na na kasị elu akụrụngwa, nke tọrọ ntọala siri ike maka ndị ahịa anyị 'ọnụ-nke-ọnụ.
Mmepụta isi dị na Dongguan, obodo ama ama ama ama ama ama ama n'ụwa niile. Dongguan bụ otu n'ime ndị kasị ibu n'ichepụta bases na ụwa na ike n'ichepụta ike na zuru ezu ulo oru usoro. Anyị ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 6000 square mita nke osisi, ọkachamara na nkenke CNC machining ọrụ na OEM, ODM akụkụ nzukọ ọrụ.
Akụrụngwa ihe eji arụ ọrụ ahụ gụnyere ọtụtụ ebe ndị na-arụ ọrụ CNC, CNC lathes, lathes, igwe na-egwe ọka, igwe na-egweri ihe, mkpochapu waya, wdg, ma webatakwa ihe nnwale dị oke mkpa dị ka CMM, altimita na projector.
Ndị ahịa anyị dị na Asia, North America na Europe. Anyị na-agba mbọ iji na-amị na kpọbata elu mma nkenke CNC machining akụkụ maka ahịa n'ụwa nile. Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji ọgwụ na ahụ, semiconductor, ígwè na ndị ọzọ ọrụ.
Anyị nwere otu ndị na-eduga talent onye ịmụta ọkachamara ihe ọmụma nke nkenke ígwè na ngwá, na-eduga oru pesonel ịmụta ngwa ngwa, na jikwaa enterprise na nkà mmụta sayensị, nke bụ na a ụda mmepe.
Anyị nwere ndị otu ọkachamara na injinia ọrụ na ndị ọrụ aka ọrụ nwere ọmarịcha ọrụ, anyị na-arịọ ndị ọrụ teknụzụ mgbe niile ka ha nwee usoro nhazi dị elu ma jiri teknụzụ siri ike ma sie ike iji nweta nsonaazụ kacha mma. Iji ike anyị niile na ịnụ ọkụ n'obi anyị, anyị na-elekwasị anya n'inye ndị ahịa ngwaahịa dị elu ma dị elu, ma bụrụ onye gị na ya ga-atụkwasị obi. Na-atụ anya ndụmọdụ gị.
Site na sistemụ ezigbo usoro dị mma, nkwado zuru oke na nkwado ndị ahịa zuru oke, usoro ngwaahịa na ihe ngwọta nke nzukọ anyị mepụtara ka a na-ebupụ gaa mba ole na ole na mpaghara na-agbaso ụkpụrụ azụmaahịa nke uru bara uru, anyị merie aha ọma n'etiti ndị ahịa anyị n'ihi nke ọrụ anyị zuru oke, ngwaahịa dị mma na ọnụ ahịa asọmpi. Anyị ji obi ụtọ na-anabata ahịa si n'ụlọ na mba ọzọ na-akwado anyị maka nkịtị ịga nke ọma.
Anyị na-atụ na anyị nwere ike iru ogologo oge imekọ ihe ọnụ na ihe niile nke ndị ahịa, na-atụ anya na anyị nwere ike melite asọmpi na imeri mmeri-mmeri ọnọdụ ọnụ na ndị ahịa. Anyị ji obi anyị na-anabata ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile ịkpọtụrụ anyị maka ihe ọ bụla ịchọrọ! Nabata ndị ahịa niile n'ụlọ na mba ofesi ileta ụlọ ọrụ anyị. Anyị nwere olile anya ka anyị na gị nwee mmekọrịta mmekọrịta, ma mepụta echi ka mma.